DHAGEYSO: M/weyne Gaas oo lahadlay ciidamada Badda PL, Muxuuse u sheegay? – Puntlandtimes
DHAGEYSO: M/weyne Gaas oo lahadlay ciidamada Badda PL, Muxuuse u sheegay?
BOOSAASO(P-TIMES)- Madaxweynaha dawladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa booqday Saldhiga tababarada ciidamada Badda Puntland ee ay gacanta ku hayso dawladda Imaaraatka Carabta, wuxuuna la hadlay cutubyo kamid ah ciidamadda oo xiligaas kusugnaa Xerada Tababarkan isagoo bogaadiyey howlaha baaxadda leh ee kasocda gudaha Puntland.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in ciidamadan ay yihiin oo kaliya ciidamada ugu tababar wanaagsan, ugu howlkarsan uguna shaqada badan ciidamada dalka Soomaaliya oo dhan kusugan, maadaama ay ka shaqeeyaan arrimo muhiim.
Madaxweyne Gaas ayaa cadeeyey in ay waajib tahay in laga shaqeeyo sidii qeyb weyn looga qaadan lahaa dibu dhiska ciidamada, wuxuuna cadeeyey in ay Puntland maqsuud ku tahay shaqada wanaagsan ee laga qabtay Saldhiga tababarka iyo ciidamada wanaagsan ee la carbiyey mudadii uu shaqeynayay.
Madaxweynuhu wuxuu u sheegay Askarta uu hadalka u jeediyey in ay Abaalweyn u hayaan Shacabka Soomaaliyeed oo dhan, maadaama ay lahardamayaan cadow duulimaad ku ah noloshooda, balse wuxuu sheegay in abaalkaas uu yahay mid ay u hayaan Shacanka oo dhan.
Ka hor inta uusan Madaxweynaha la hadlin askarta wuxuu mid mid u booqday dhamaan qeybaha ay ka kooban tahay xerada tababarka ciidamada Badda Puntland ee QAW, waxaana muuqata in lasoo afjaray is faham-waa ka taagnaa xariirka labada dal oo saameyey Puntland.
Kormeerkan shaqo waxaa kuwehliyey Madaxweynaha Puntland, Senator katirsan Aqalka Sare ee Soomaaliya, gaar ahaana Prof, Cabdirisaaq Jurille oo u janjeera siyaasadda Imaaraatka Carabta ayaa kamid ahaa xubnihii madasha joogay ee soo arkay xeradan iyo sidda ay u shaqeyso.
imaaraadka was walaalaheen farmaajo iyo qolooyinka koofurta somaliya katashada dan idiinkuma jirto
Dawlada fadaralka somaliya waxa ladegay Mr.Xassan Ali khayyre,waxuu shaqadii ka’eryey gudomihi golaha shacbiga Qaranka,asagoo iska horkenay,masulinta golaha shacbiga,puntland wa cusub aya uberyey waxayna ogatay wadada khaldan ee xukumada fadaralka muqdisho ku socoto,waxa laga codsanaya masulinta somaliyed gar ahan kuwa puntland in aay taxadar ka mujiyan Talo xumada aay ku socoto mamulka guracan ee uu hogamiyo Ra’iisal wasare Xassan Ali khayre oo cid aamini karta aay yartahay.